I-Best Woodstock yoLuhlu lweeNcwadi kunye neeVideos
Nguwuphi omile ukuvavanya kwexesha?
Ingoma ezingaphezu kwe-200 zenziwa kwikhosi ye- Woodstock ngowe-1969, ngokokuqala, ithuba lokukhetha iintandokazi luyinto ephazamisayo. Kwiminyaka engama-45 kamva, inani elungileyo limile ukuvavanya kwexesha. Phinda uphile ezinye zezinto ezikhunjulwayo, uze wabelane ngeentandokazi zakho.
Ibhodi - "Ubunzima"
R. Gates / Abasebenzi / Uvimba weeNcwadi / i-Getty Images
Ukubonakala kweBhodi kwi-Woodstock kwakuyinxalenye yotyelelo olukhuthaza i-albhamu yabo yokuqala, Umculo ovela kwi-Pink Pink , ekhutshwe ngo-1968. Kwiiveki ezimbalwa emva kwe-Woodstock babhala i-albhamu yabo yesibini. E-Woodstock, i-The Band (uRobbie Robertson, uVevon Helm, uGarth Hudson, uRichard Manuel, noRick Danko) banike ukuba baninzi abalandeli babo bakholelwa ukuba enye yeyona nto ibhetele ngayo. Kaninzi "
I-Blood Sweat & Tears - "I-Wheel Spinning"
I-BS ne-T yayinee-albhamu ezimbini eziphumeleleyo phantsi kweebhanti zazo eziya kumthendeleko we-Woodstock. Ukuba enye yeentloko zenzo, zazicwangciswe ngasekupheleni kosuku lokugqibela. Ngelishwa, ngenxa yokulibaziseka kwamanzi kunye nokuphazamiseka kwamandla, isethi sabo asizange siqale de kube yiyure yehora ngoMsombuluko, emva kokuba umkhosi ujonge ukuphela. Nangona kunjalo, ukubonakala kwabo kwandise ngakumbi ukuqinisa ukuphumelela kwabo, kwaye barekhoda i-albhamu yabo yesithathu ngaphambi kokuba bahambe kwikhenketho lehlabathi emva kweeveki ezimbalwa emva kwe-Woodstock. Kaninzi "
Ukukhutshwa kwamathanga - "I-Woodstock Boogie"
Isitayela somlilo we-psychedelic-flavored style blues yayingumdlalo ogqityileyo kubaphulaphuli be-Woodstock. Abalinganiswa bezilwanyana, bekhishwe ii-albhamu ezine phambi kwe-Woodstock. Iseti yabo, eyaqala ukutshona kwelanga ngosuku lwesibini lomthendeleko, yiyo leyo ibhanti eyaziwayo. Ingqungquthela ebizwa ngokuthi "i-Woodstock Boogie" yayibonakaliswe kwi-1968 ye-albhamu ye- Boogie ne-Canned Heat njenge "Fried Hockey Boogie." Kaninzi "
UJoe Cocker - "Uncedo oluncinci kubahlobo bam"
Ukubonakala kwe-Cocker's Woodstock kwakucwangciselwe iintsuku nje ngaphambi kokuba umcimbi. Kwakudingeka ukuba abe yinqwelwe ngenxa yeendlela ezinkulu zeendlela zokuhamba, kwaye ikhefu lakhe lalinqunyulwa ngenye yeendudumo ezininzi ezazibethe umthendeleko. Kungakhathaliseki ukuba, uCocker wabiza amava "okhethekileyo" kwaye wanikela enye yeempembelelo zakhe eziphefumlelweyo zento eya kuba yinye yeengoma zokutyikitya.
Ukubuyiselwa kwe-Clearwater ye-Creedence - "Hlalani kuChooglin"
Nangona kwakusasa kusasa ngeCawa ngelixesha abaye bathatha ngalo iqonga, iiCCR zafunyanwa ngentshiseko ngabangenayo ikhefu lokulala. Isetyenzisiwe sisuka kwizinto eziqhelekileyo ezivela kwiibhanki ezintathu zokuqala zebhanki. Isifo esilulelekileyo esithi "Hlalani ku-Chooglin" "kwakuyi ngoma yokugqibela ehleliwe kwisethi, phambi kwesihlwele-esiyalelwe. Kaninzi "
I-Crosby ikhona i-Nash ne-Young - "I-Suite: I-Judy Blue Eyes"
Ifoto nguHenry Diltz
Umsebenzi wabo we-Woodstock wawungowesibini nje i-gig ehlala kuyo, kwaye abazange bathathe amathambo malunga nokuba neentloni. UStephen Stills uxelele isihlwele esithi, "Leli lihlandlo lesibini esiye sadlala phambi kwabantu, ndoda. Sinoyika kakhulu." U-Neil Young wayejoyine iqela elingaphambi kweenyanga ezimbalwa kodwa akazange athathe isigaba kuze kube yilapho i-CSN yenze iingoma eziliqela kwi-albhamu yazo yokuqala. Isethi ivuliwe nge "Suite: Judy Blue Eyes." Kaninzi "
I-Richie Havens - "UYohnny"
Ngoku ungaphendula umbuzo we-trivia, "Yayiyiphi ingoma yokuqala eyayenziwe kwiWolstock?" ngokuzithemba. URichie Havens, oye waxoshwa kwisikhundla sokukhokela ngenxa yokuba izenzo ezacwangciswe phambi kwakhe zazingena kwi-traffic, kwakukho isihlwele esingaphantsi kwesiphelo sakhe kwisigxina sokuqala. Ingqungquthela yokulwa nemfazwe ethi "uYohn Hands" yenze i-open opener. Amaziko abhalile ingoma kunye noLou Gossett, oya kuqhuba umsebenzi njengomdlali we-award.
UJimi Hendrix - "I-Voodoo Child"
© Photo Flashbacks - I-Doug Hartley Collection
Njengomqhubi wokugqibela kwinqanaba le-Woodstock, u-Hendrix wagesiza isihlwele kwisithuba sakhe sonke. Amajelo akwenza uninzi lwalolu hlobo lwe-"Star Spangled Banner," kodwa abaninzi abalandeli bajonga ukusebenza kwe "Voodoo Child" ukuba ibe yinto ekhangelekileyo kwiseti. Kaninzi "
UJefferson Airplane - "NgoMgqibelo Ngentsasa"
Ehleliwe njengesenzo sokuqala seMgqibelo ebusuku, iJefferson Airplane ekugqibeleni yathabatha isigaba emva nje kokuphuma kwelanga ngeSonto ekuseni. U-Grace Slick wakwazi ukuhleka usulu malunga naloo bhanti ephakanyiswe kwisigaba, ethembise "umculo womculo wekusasa." I-opener isethi "ngoMgqibelo emva kwemva" ukususela ngo-1967 Emva kokuhlamba i- albhamu kaBhaxter.
UJanis Joplin - "Ibhola kunye neCandelo"
U-Joplin wayesehamba ecaleni phantse ngonyaka ngaphambi kweWolstock, kwaye ukusebenza kwakhe kwakuqukumbele kwiingoma ezivela kwi-albhamu yokuqala ye-albhamu yakhe yokuqala, ukuguqulelwa kwakhe kwe "Ibhola kunye neCandelo" kuqala kubonakala kwi-albhamu yakhe yokugqibela kunye noBig Brother kunye ne-Holding Company, Cheap Thrills. Kwakusekhona isisityezelo sokusebenza kwayo xa ekhwelisa e-Woodstock. Kaninzi "
Intaba - "I-Train yasezantsi"
Abadlali bee-Blues Intaba ayengakhululanga nayiphi na i-albhamu kwaye yenze i-gigs ininzi yesithathu ngaphambi kokuba bathathe isiteji e-Woodstock ngobusuku bosuku lwesibini lomthendeleko. U-Leslie West, uFelix Pappalardi, uSteve Knight noNorman Smart baxhotywe nge-12-song set, banjiswe yiTrobound Train.
Santana - "Umnikelo Womphefumlo"
Isikhathi yinto yonke, kwaye unomgqugquzeli oyilwayo uBill Graham njengoko umphathi wakho engenzi buhlungu. U-Santana wayeyaziwa kwi-khampani yaseSan Francisco, kodwa engaziwa kwiinkoliso ezininzi zaseThomasstock. Nangona kunjalo, kwakukho uxhamlwano olukhawulezayo, kwaye isethi yonke ka-Santana icatshulwa njengesiqaliso seemeteoral somsebenzi wabo omde kunye nokuphumelelayo, ngokuqala nge-album yabo yokuqala enegama elibhaliweyo, bakhululwa nje iintsuku emva komthendeleko. Lo msebenzi "Umnikelo Wemphefumlo" ungenye yeqela elikhunjulwayo. Iquka umdlali omncinane kunazo zonke eWitstock, oneminyaka engama-20 ubudala umdumli uMichael Shrieve.
Ngubani owayengomnye amabutho awaziwa kakhulu kwi-Woodstock. NjengoJefferson Airplane, abaye badlala ngokuphambili, babecwangciselwe ukuba baqhube umgangatho weMigqibelo yasebusuku kodwa abazange bafikelele kude kube ngamaxesha angaphambi kokuhlwa kweSonto. Isiseko sabo sasiba malunga ne-opera yamatye uTommy (kungekhona ukubala phakathi kwePete Townshend xa evala u-Abbie Hoffman entloko kunye negitare emva kokuba uHoffman aqhube isiteji kwaye wayilawula imakrofoni), kodwa aphelisa isethi ngomxholo wephepha ukususela ngo-1965 i-albhamu yokuqala, i- My Generation .
Izizathu Ezintle Zokuba Zibahedeni
I-Shanidar Cave (iIraq) - Ubundlobongela be-Neanderthal kunye namaPhulo enjongo
Indlela yokukhetha isiKhokelo sokuBhala soMculo
Ngonyaka we-2016 i-Olimpiki yoMkhondo kunye neShedyuli yoHlelo
Iimiphumo ezikhawulezileyo zeNicotine Kwi-cigig Smokers
Itheyibhile yoLwazi loLwazi
Idilesi yeeNcwadi ezilula
Inkcazo yeDynamic Equilibrium
UBrianne Theisen-Eaton: IQela leMicimbi yeeMidlalo ezininzi zeCanada
Iiprojekthi zezobugcisa zeZakhono zoBuchule beZakhono eziPhambili kunye neziKhokelo eziLandelayo
Konke malunga neC # Language Language